DHIRKU WAA DURI AMA MAQAARKA: WAA WARSHADDA LAGAMA MAARMAANKA U AH HANNAANKA DAREERAHA, QAYBO KA MID AH AYAA LOO ISTICMAALAA IN LAGU KARIYO CUNTADA? - BEER CAGAARAN
Raadi haddii uu dhirku yahay duri ama maqaarka. Dib-u-soo-kabashada decoctions, faleebo, shaah
Isticmaalka dhir ayaa caan ku ah maaha oo kaliya karinta, laakiin sidoo kale daawada dhaqameed. Qodobo badan oo faa'iido leh ee warshadda ayaa u oggolaanaya in loo isticmaalo dagaalka lagaga hortagayo cudurada kala duwan.
Saamaynta lagu garan karo ee cillada cagaaran. Waxay ka caawisaa in meesha laga saaro caabuqa kaadiheysta, wuxuu kor u qaadaa cusbada xad-dhaafka ah ee jirka wuxuuna u dhaqaa sida diuretics.
Maqaalkani wuxuu bixinayaa xisaab faahfaahsan oo ah marka dhirta loo isticmaali karo sida duriinka. Sidoo kale calaamadaha iyo iska horimaadyada isticmaalka.
Goorma ayaa loo baahan yahay?
Astaamaha ugu muhiimsan ee hannaanka dareeraha ah waa barar ah unugyada.. Sidoo kale, duri duri waa la tilmaami karaa:
cadaadiska dhiigga aan degganeyn;
inta aad uurka leedahay.
Xaaladdan oo kale, daroogadu inta badan waxay ku dari karaan daaweynta guud, adigana ma qori kartid naftaada. Xataa iyada oo la adeegsanayo daaweynta dadweynaha, la-talin hordhac ah oo lala yeesho takhasusle ayaa lagula talinayaa.
Waxaa si weyn looguma talin in la isticmaalo diuretiyada miisaan lumis, sababtoo ah tani waxay sababi kartaa buuqa jirka iyo miisaanka milixda.
Miyuu dhirta lagama maarmaan u yahay hannaanka dareeraha?
Waxay ka qayb qaadataa ka saarida cusbooyinka aan loo baahnayn iyo dheecaanka xad-dhaafka ah ee jirka, kaas oo lagu sharraxayo jiritaanka epiol iyo myristicin. Dhir - ili ah oo ka kooban qaybo badan oo ka mid ah qaybaha waxtar leh. Waa hogaamiyaha fitamiin C-ga sidoo kale waxaa ku jira:
Cagaarka iyo miraha dhirta ayaa leh saameyn ku dhaca maqaarka iyo diaphoretic.. Greens caawiyaan in ay la dagaallamaan dhagaxyada kelyaha, gallbladder kaadida. Chlorophyll oo ku jira halabuurka ayaa bixiya taageerada hawlaha caadiga ah ee jidhka.
Dhir ayaa sidoo kale leh guryaha soo socda:
hagaajinta qanjirrada adrenal;
caadeysiga sonkorta dhiiga;
Alaabta ku salaysan dhirta ayaa la muujiyaa marka:
joogitaanka jirka ee tiro badan oo ah sunta iyo sunta.
Inkasta oo dhammaan faa'iidooyinka dhirta, waxay leedahay khilaafyada soo socda:
idiosyncrasy iyo falcelinta xasaasiyadda ee dhir;
hababka bararka oo ba'an iyo dabadheeraad ah;
uurka iyo nuujinta, maaddaama dhirku uu sababi karo midabka ilmo-galeenka ama kor u kaca ilmaha;
boogaha, suuxdinta, cilladaha jirka ee dheef-shiid kiimikaadka.
Sidoo kale laguma talin in lagu xadido dhir. Tani waxay ka xanaajin kartaa kororka ku yimaada codka gudaha xubnaha jirka, muruqyada, lalabbada, iyo daciifnimada guud.
Sidaa darteed, casiir ah ee warshadda waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo qasi. Qalabka qiimaha leh ee kiiskan looma lumo, laakiin saameynta ayaa noqon doonta mid jilicsan.
Waa maxay qeybaha geedka?
Wixii diyaarinta wakiillada waxqabadka duriinka, abuurka, xididdada, iyo caleemaha qalalan ama cusub ee loo isticmaali karo. Waxay ka mid yihiin diyaarinta:
Dhirta waxaa loo isticmaali karaa labadaba qaab saafi ah iyo isku dhafan qaybo kale.
Si aad u hesho lacagta ugu badan ee dhir, waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u codsato. Waxaa haboon in la tixgeliyo qaar ka mid ah cuntada ugu badan ee caanaha laga helo.
Diuretic shaah qallin dherkeedu wuxuu si fiican u caawiyaa in laga saaro dheecaanka xad-dhaafka ah ee jirka. Si loo diyaariyo, waxyaabaha soo socda ayaa la qaadaa:
2 qaado oo ah xididada qallalan iyo miraha geedka;
galaas biyo ah.
Waa lagama maarmaan in la buuxiyo biyaha ceeriin.
Geli dabka oo ha karkariyo.
Kadib karkarinta, qabo daqiiqad kale, ka dibna ka tago nus saac gudaheeda si aad u dillaacdo.
Sifee kahor isticmaalka.
Saddex jeer maalintii cab cab cabitaan ka hor. Qaado 10 maalmood gudahood.
Maaddooyinka soo socda ayaa looga baahan yahay diyaarinta alaabta:
220 g oo xididdada dhirta la jarjaray;
0.5 litir oo caano ah.
Roots waxay u baahan yihiin in ay noqdaan kuwo pre-qalajiyey, iyaga ku shub budada, ka dibna ku shub caano.
Weelka ku rid weelkan ku yaal dab aad u gaaban oo wax kariya ilaa dareeraha laba jeer ka yar yahay.
U ogolow in ay ku qaboojiso oo ay ku cadaadiso iyada oo loo maro cheesecloth.
Waxaa lagula talinayaa in aad cabto cabitaanka la qaadanayo qaadashada miiska saddex jeer maalintii kahor isticmaalka cuntada. Qaado laba toddobaad.
Faleebo ee xididada
Cuntadani waxay u baahan tahay waxyaabahan soo socda:
hal rizoo oo ah warshad dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah;
biyo fudud fudud.
Shub hal litir oo biyo ah karkaraya.
Ka tag saacad.
Qaado nus koob ilaa 12 maalmood.
In dhirta dhir badan oo saliidaha lagama maarmaanka ah oo kuu ogolaanaya inaad hagaajiso socodka kaadida. Wixii diyaarinta ee bogsiinta maraq walxaha soo socda ayaa loo baahan yahay:
shaaha oo ah shaaha laga sameeyey xabuub;
Seeds waxay u baahan yihiin in ay ku shubaan biyo karkaraya oo ka tagaan si ay u dillaacaan habeenkii.
Waxaa lagu talinayaa in la cuno seddex jeer maalintii kahor cunista cuntada qiyaasta hal qaado oo ah. Muddada koorsada caadiga ah waa laba asbuuc, laakiin kiis kasta waa lagama maarmaan in la sheego dhakhtarka.
Sidoo kale Waxaad samaysan kartaa decoction adoo isticmaalaya miraha iyo xididdada geedka..
Maaddooyinka qallalan waxay u baahan yihiin in laga buuxiyo biyo iyadoo lagu qiyaaso 100 ml oo ah walxo cayriin ah.
Ku rid dabka oo karkariyo, ka dibna u kari ilaa kiilo laba daqiiqo oo u ogolow inuu qaboojiyo.
Qalabku waa in la mariyaa saacad.
Isticmaal si isku mid ah sida decoction hore.
Casiir khudradda xitaa waxay leedahay saameyn kudnaan.. Ka hel caleemaha tirtiray geedka cusub. Casiirka la qasiqiyay biyo oo la cunay cunto ka hor. Tani ma aha oo kaliya inaad u fasaxdo inaad ka saarto dheecaanka xad-dhaafka ah oo laga saaro bararka, laakiin sidoo kale waxay hagaajisaa nidaamka dheef-shiidka.
Maxaa la bedeli karaa?
Maqnaanshaha dhir ama xammilxumo shakhsi ahaaneed, waxaad isticmaali kartaa dhir kale oo leh saameyn laga duro.
Liiskoodu waa mid ballaaran. Halkan waxaa ku yaala geedo yaryar oo leh saameyn isku mid ah:
Dhismaha St. John;
Waxaad u baahan tahay inaad fahamto in daaweynta dadwaynaha aysan had iyo jeer waxtar lahayn. Haddii ay jiraan dhibaatooyin kaadiheysta habka kaadida, waxaad u baahan tahay inaad la tashato takhasusle. Waxa uu qori doonaa daaweyn ku filan, mid ka mid ah qaybaha kaas oo noqon kara cuntada dhirta ku salaysan.